Icomania: Azonao vinavinaina daholo ve ireo sary masina? | Vaovao IPhone
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia miresaka momba ny 4 Sary 1 Teny aho, lalao iray ho an'ny iPad izay tsy maintsy ifandraisantsika sary 4 amin'ny tsirairay avy ka miaraka amin'ireo litera izay omen'ny fampiharana anay, izahay dia mamorona teny mety amin'ny banga izany koa dia nanome anay ny fangatahana. Indraindray, dia sarotra taminay ny nahazo ilay teny notadiavin'ny lalao, fa amin'ny farany, azonao antoka fa nahavita nandalo ny haavony ianao.
Amin'ity lalao vaovao (tena vaovao) antsoina hoe Icomania ity tsy maintsy hahita ilay teny ao ambadiky ny kisary tsirairay isika amin'ny 2D. Ireo sary masina dia afaka miatrika lohahevitra marobe: toetra, malaza, marika, sinema, firenena, logo ... Nahoana araka ny eritreritrao no niresaka taminao aho tamin'ny fampidirana sary 4 1 Teny? Satria ny mpamorona ny Icomania dia mitovy amin'ny an'ny lalao 4 Sary.
Icomania manana tanjona tsotra: tadiavo izay tian'ny sary hambara amintsika. Miaraka amin'ny interface tsara MADIO miditra amin'ny lalao izahay:
Eo an-tampony isika dia manana pista: ny lohahevitra momba ny kisary, amin'ity tranga ity, manana ny Statue of Liberty any New York isika. Misy lohahevitra samihafa izay ahitantsika ny sary masina: mozika, tarehimarika, firenena, mpilalao ...
Amin'ny lafiny ankavanana ananantsika karazana làlana roa:
Mametraha taratasy ho an'ilay teny karohina
Esory ireo taratasy naroson'ny fangatahana.
Ary ao amin'ny Ny lafiny ankavia dia azontsika atao ny mizara amin'ny tambajotra sosialy: Twitter sy Facebook. Tsy maintsy mifandray amin'ireo tamba-jotra sosialy aloha isika vao afaka mizara imbetsaka araka izay tadiavintsika ary avy eo matetika. Sahia manontany ny namanao momba ilay sary masina! Ahoana raha fantatr'izy ireo?
Raha milalao amina sary masina vitsivitsy ianao dia hitantsika fa be dia be ny dokam-barotra manelingelina raha ny amin'ny famaliana ny sary masina sy ny fivelarana. Ahoana no fanesorantsika ny doka? Misaotra amin'ny-App-Purchase:
Premium!: Tsy misy doka, fanampiana 4 fanampiny, ary Tsotra Joker Buttones. Ireto asa ireto dia mendrika antsika 1,79 € ary alaina avy amin'ilay fampiharana mihitsy.
Vonona ve ianao hahita ireo sary masina natolotr'i Icomania anao? Tongava misintona ny lalao, maimaim-poana izany!
Fanazavana fanampiny - Lalao 3 izay hampifandray anao amin'ny tolakandronao mankaleo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Icomania: Azonao vinavinaina daholo ve ireo sary masina?
Waterin, fampiharana hahatsiarovana fahazarana tsara